युनेस्को टोलीको सुझाव–सम्पदा पुनर्निर्माणको अभिलेखीकरण होस्- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
युनेस्को टोलीको सुझाव–सम्पदा पुनर्निर्माणको अभिलेखीकरण होस्
काठमाडौँ — नेपाल भ्रमणमा रहेका युनेस्को टोलीले सम्पदा पुनर्निमाणको अभिलेखीकारण हुनु पर्ने सुझाब दिएका छन् । युनेस्कोको रियाक्टिभ मोनिटरिङ मिसन टोलीले सुझाब दिएको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलगायतका पदाधिकारीसँग भेट गरी काठमाडौं उपत्यका विश्व सम्पदा सूचीभित्र पर्ने सातवटा सम्पदा क्षेत्रहरूको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् ।
प्राधिकरणले सम्पदाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिई पुनर्निर्माणलाई अघि बढाएको ज्ञवालीले टोलीलाई जानकारी गराए । ‘विश्व सम्पदा क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका कार्य भइरहेको छ । दीर्घकालीन रूपमा अझ व्यवस्थित गर्नका लागि सबै पक्षलाई समेटेर विस्तृत गुरुयोजना निर्माण गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
मिसनका लागि विश्व सम्पदा केन्द्रको प्रतिनिधित्व गरेका इन्टरनेसनल सेन्टर फर द स्टडी अफ दी प्रिजर्भेसन एन्ड रेस्टोरेसन अफ कल्चरल प्रोपर्टिज (इक्रोम) का अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ गामिनी बिजिसुरियाले यस बेला सम्पदाहरूको उचित संरक्षणको अवसर रहेकोले पुनिर्निर्माण कार्यको अभिलेखीकरण गर्न सुझाव दिए । इन्टरनेसनल काउन्सिल अन मोनुमेन्टस् एन्ड साइट्स (इकोमस) की अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ क्याथरिन फोब्सले गुरुयोजना निर्माण सुरु भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै आगामी फेब्रुअरीमा पुरातत्त्व विभागले पठाउने रिपोर्टको प्रगति समेट्न प्राधिकरणलाई सुझाव दिइन् ।
युनेस्को काठमाडौं कार्यालयका नेपाल निर्देशक क्रिस्टियन म्यानहार्टले युनेस्कोले सम्पदा पुनर्निर्माण गर्दा गतिमा भन्दा गुणस्तरमा ध्यान दिने उल्लेख गर्दै पुरातत्त्व विभागलाई नीति निर्माण गर्न अझ सक्षम हुने गरी बलियो बनाउन सुझाव दिए ।
सम्पदा क्षेत्रहरूको संरक्षणको अवस्था, यसअघिको एड्भाइजरी मिसनले गरेका सिफारिसको कार्यान्वनको अवस्था र ६ वर्षीय पुनर्लाभ गुरुयोजनाको कार्यान्वयन रणनीतिको विकासबारे मूल्यांकन गर्ने कार्यादेशसहित असोज २९ मा मिसन नेपाल आएको थियो । भूकम्पबाट काठमाडौं उपत्यका विश्व सम्पदा सूचीभित्र पर्ने सातवटा सम्पदा क्षेत्रका १ सय ४० वटा सम्पदाहरूमा क्षति पुगेको थियो । यसमध्ये ९० वटा सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेका प्राधिकरणले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र पशुपति, स्वयम्भूनाथ, हनुमानढोका दरबार, पाटन दरबार, भक्तपुर दरबार, चाँगुनारायण र बौद्धनाथ क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छन् ।
प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७६ ०९:१०
किन बनेन सडक सफा र सुरक्षित ?
कार्तिक ३, २०७६ सीमा तामाङ, प्रशान्त माली
काठमाडौँ — चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ ओहोरदोहोर गर्ने सडकमा फोहोरको टुक्रा त परै जाओस् धुलोसमेत थिएन । साढे ६ सय कर्मचारी बिहानदेखि मध्यरातिसम्म खटिएका थिए । राजधानीबासीले त्यसको निरन्तरता चाहेका छन् । सम्भव छ ? ‘त्यसबेला राजधानीलाई सफा राख्न सरकार नै लागेको थियो । अहिले काठमाडौं महानगरपालिका मात्र छ,’ महानगरका फोहोर व्यवस्था विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले भने, ‘महानगर एक्लैले त यो सम्भव छैन । प्रयास भने जारी रहन्छ ।’
विभागले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी निरन्तरता दिन छलफल गरिरहेको उनले बताए । धुलोमुक्त र सरसफाइ गर्न महानगरपालिका र सम्बन्धित निकायको अग्रसरताले मात्र पुग्दैन, सर्वसाधारणको पनि सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी आउनुअघि सडक सरसफाइ गर्न महानगरको ७ वटा ब्रुमर, ७ जेट मेसिन र साढे ६ सय कुचीकारलाई सडकमा खटाइएको थियो । सडकमा फोहोर देख्नासाथ वा हुनेबितिक्कै सफा गर्ने जिम्मेवारी तिनीहरूलाई दिइएको थियो । सडक विभागका कर्मचारी पनि उत्तिकै खटेका थिए । चाडपर्वका बेला सवारीसाधन र पैदलयात्रुको चाप कम भएकाले दिउँसो पनि ब्रुमर चलाउन सकेको श्रेष्ठले बताए । सडकमा गुड्ने केही सवारीसाधनलाई डाइभर्सन गरी ब्रुमर तथा जेट मेसिन सञ्चालन गरिएको थियो । ‘तर अहिले त्यो सम्भव हुँदैन । सवारीसाधन र पैदलयात्रुको चाप बढेसँगै ब्रुमर, जेटमेसिन सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने, सञ्चालन गर्दा धुलो उड्ने हुँदा ट्राफिकदेखि सबैलाई असर पर्छ,’ श्रेष्ठले भने । महानगरले सी आउँदाकै जस्तो सडकको अवस्था बनाउन नसक्ने अर्को कारण निर्माण सामग्री बोकेको सवारी हो । त्यसबेला ट्रकलाई सहरभित्र प्रवेश गर्न दिइएको थिएन । सी फर्किएलगत्तै रातभरि माटो, रोडालगायत निर्माण सामग्री बोक्ने ट्रक गुड्न थालेको छ ।
भ्रमणलाई लक्षित गरी विभागले फूलपातीभन्दा अघिदेखि नै जुनसुकै बेलामा बढार्ने तथा धुलो संकलन गर्ने काम गरेको थियो । धुलो उड्न पाएन् । कुचीकारले ५ देखि १० बजेसम्म कुचो लगाउने, फोहोर उठाउने काम गर्छन् । तर सी आएका बेला दिउँसो र साँझसम्म पनि कुचीकार, ब्रमुर, जेट मेसिन सडकमै थिए । ‘अन्य दिनहरूका तुलनामा धेरै समय खट्यौँ, सडकमा कुचीकार, ब्रुमर, जेट मेसिनको अभाव नहुँदा फोहोर तथा धुलो जमेर बस्ने अवस्था थिएन,’ जमल क्षेत्रका कुचीकार तथा नाइके कृष्णमाया पौडलले भनिन्, ‘ फुटपाथ कुचीकारले सफा गर्‍यो, ब्रमुरबाट धुलो संकलन भयो र ब्रुमरले नसकेको ठाउँमा जेट मेसिनबाट पानी हालेर पखाल्ने काम भएको थियो । त्यसैले सडक सफाचट भएको हो ।’ एउटा मात्र रूटमा भएका सबै जनशक्ति आवद्ध हुँदा काम पनि प्रभावकारी देखिएको उनले बताइन् ।
राज्य नै लागेपछि अन्य निकायहरू पनि जागरूक भई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेकोले सडक सफा राख्न तथा धुलो उडन् नदिन सफल भएको विभागीय प्रमुख श्रेष्ठले बताए । ‘ढल बिग्रँनासाथ मर्मत, पानीको पाइपलगायत सबै कार्य समयमै मर्मत गर्ने हो भने सजिलैसित सफाइको काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘स–साना कुरालाई बेवास्ता गर्दा सरसफाइ गर्न तथा धुलो रोक्न सकिँदैन ।’
पाहुना फर्किसकेपछि फुटपाथ पसलले सडकमा आउँदा फोहोर देखिन थालेको छ । काठमाडौं फेरि पहिलेकै धुवाँधुलोको अवस्थामा फर्किएको उनी बताउँछन् । ट्राफिक प्रहरीले सर्वसाधारणलाई पनि फुटपाथमा हिँड्न निषेध गरेको थियो । सर्वसाधारणले जथाभावी फाल्ने फोहोरमा पनि कमी आएको उनको अनुभव छ ।
कोटेश्वर–कलंकी सडक खण्डमा हुने दुर्घटनाका मुख्य कारणमध्ये पर्याप्त फुटपाथ नहुनु पनि हो । बल्खु क्षेत्रमा फुटपाथ छ, सञ्चालनमा छैन । पूरै झारपातले ढाकिएको छ । फोहोर फाल्ने ठाउँ बनेको छ । पैदल यात्रु सडकबाट हिँड्न बाध्य छन् । सानेपा हाइटमा एकतर्फी स्टिल बार लगाइको छ । मोटरसाइकल, बस तल खस्ने सम्भावना उत्तिकै छ । यी कार्यहरू टेन्डरबिनै पनि गर्न सकिने भए पनि गरिएको छैन ।
कलंकी खसीबजार क्षेत्रमा बस स्ट्यान्ड छ । तर, त्यहाँ बस रोक्ने गरिएको छैन, निजी गाडीको पार्किङ स्थल बनेको छ । स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा बा २० च ६०३३ र बा ८ च ५८४२ नम्बरको कार र एउटा स्कुटर त्यहाँ रोकिराखेको थियो । स्टान्डमा रोक्नुपर्ने बा ५ ख १९६ नम्बरको बस सडकमै रोकेर यात्रु ओरालेर गन्तव्यतर्फ लागेको थियो । एकैछिन्मा अर्को बस पनि रोकियो । उक्त बसले पनि सडकमै यात्रु ओराल्यो । यो क्रम दोहोरिरहेको थियो ।
बल्खु चोकमा पार्किङ निषेध लेखिएको दुइटा ट्राफिक संकेत छ । सार्वजनिक यातायात भने यही रोकेर यात्रु चढाउने र आरोल्ने गर्छ । कलंकीतर्फ जान लागेको बा५ख २५६२ नम्बरको बस हुइँकेर चोकैमा रोकियो । लगत्तै सहचालक ओर्लेर यात्रु बोलाउन थालिहाले । यहाँ चार जना यात्रु चढेका थिए ।
यी त केही उदाहारण मात्र हुन् । चक्रपथमा फुटपाथ सुचारु गर्ने, बस स्ट्यान्ड व्यवस्थित गर्ने, निजी सवारीसाधनलाई सडकमा पार्किङ गर्न कडाइका साथ निषेध गर्ने र निश्चित ठाउँमा यात्रु चढाउने/ओराल्ने कार्य तत्कालै गर्न सकिन्छ । यसमा कुनै टेन्डरको जरुरी छैन, तर पनि हुन सकेको छैन । ठेक्कापट्टामा गरिने कामका लागि सम्झौता आवश्यक पर्छ तर माथि उल्लेखित कार्यका लागि त सम्झौता चाहिँदैन । पूर्व ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक सीताराम हाछेथुले सामान्य सम्झौता गरेर राख्न सकिने ट्राफिक चिह्न, लाइट पनि चक्रपथमा नभएको बताए । ‘सुरक्षाका दृष्टिकोणले सडकको दायाँबायाँ राख्नुपर्ने बार र रोड डिभाइर छैन,’ उनले भने, ‘कतिपय चोकमा ट्राफिक नै खटिएका छैनन् ।’ ट्राफिक नहुँदा स्ट्यान्डमा रोक्नुपर्ने बस सडकमै रोक्ने गरेको उनले बताए । ‘यसै कारणले धेरै यात्रु दुर्घटनामा परिसकेका छन्,’ हाछेथुले भने, ‘ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि कमीकमजोरी छ ।’ उनका अनुसार संघाई कन्स्ट्रक्सनले निर्माण कार्य अधुरै छोडेर गएको बालकुमारी पुल–कोटेश्वर चोकमा झन्डै आधा किमि सडकको दायाँबायाँ ४ वटा ड्रेन (आकाशेपानी बग्ने कुलो) खुला छ । ‘यसमा ढकनी राख्न ठेक्कापट्टा गरिराख्नुपर्दैन,’ उनले भने । काटेश्वर चोक–बालकुमारी पुल करिब एक किमि सडकमा सर्भिस ट्र्याक एक चौथाइ मात्र बनाइएको छ । त्यसपछि भीर छ । सवारी चालकले नदेख्ने भएकाले सर्भिस ट्र्याक भएर यात्रा गर्ने दुर्घटनामा पर्न सक्ने सम्भावना छ । ‘त्यहाँ ट्राफिक चिह्न राखेर दुर्घटना न्यूनीकारण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
कोटेश्वर चोकमा गाडीले ‘टर्न’ लिन आइल्यान्ड (हरित क्षेत्र) बनाउन जरुरी छ । उनले आइल्यान्ड नहुँदा गाडी मोड्दा दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना उच्च रहेको बताए । चक्रपथ सुधार योजना प्रमुख अमृत रिमालले बिनाटेन्डर गर्न सकिने सुधारका लागि योजना बनाइरहेको बताए । ‘ट्राफिक चिह्न र लाइट राख्न ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सडकको मध्य र सार्वजनिक यातायातलाई छुट्याएको लेन बीचको भागलाई पैदल यात्रुलाई बाटो काट्ने ठाउँ बनाउने तयारीमा छौं ।’ उनले बीचमा डिभाइडर राखेर बाटोलाई सुरक्षित र हरियाली थप्ने योजना रहेको बताए । ‘सर्भिस लेनमा बस र साइकल लेन पनि बनाउन लागिरहेका छौं ।
सडकको बीच भागमा मिडियटर चाँडै राखिनेछ,’ उनले भने, ‘सडक बीचको खाली स्थानको पनि उपयोग गर्ने योजना छ ।’
चक्रपथ मुलुकै सबभन्दा फराकिलो ८ लेनको हो । चक्रपथ सडकमा गत वर्ष १७ जनाको ज्यान गएको थियो ।
बालबालिका बढी जोखिममा
बालकुमारी चोकमा जेब्राक्रसिङ र आकाशे पुल छैनन् । कोटेश्वरका २० वर्षीय राजन खनाल बालकुमारीस्थित कलेजमा पर्छन् । उनी दैनिक दुई पटक सडक वारपार गर्छन् । महिनाअघि उनकै अगाडि साथी रमन क्षेत्रीलाई मोटरसाइकले ठक्कर दिएको थियो । ‘मोटरसाइकल रोक्न हात दिँदादिँदै ठक्कर दियो,’ उनले भने, ‘जाडोमा बिहान हुस्सुमा बढी जोखिम मोलेर बाटो काट्नुपर्छ ।’
कोटेश्वरका ७५ वर्षीय धर्म अधिकारीको जिम्मेवारी ७ वर्षीया नातिना श्रेया र ९ वर्षीय नाति रामलाई विद्यालय पुर्‍याउन र लिन जाने हो । चक्रपथकै कारण उनी यो जिम्मेवारी अरूलाई सुम्पिन चाहन्नन् । चोकमा भेटिएकी एक जेष्ठ नागरिकले सहायताबिना बाटो काट्न मुस्किल पर्ने गरेको बताइन् । उनीहरू मात्र होइनन् । चक्रपथ निर्माणमा त्रुटिका कारण दैनिक सयौ मानिस जोखिम मोलेर बाटो काट्नछन् । यसबारेमा डेढ वर्षअघि सडक विभाग, यातायात मन्त्रालय, चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी संघाई कन्स्ट्रक्सन ग्रुप, चक्रपथ सुधार योजनालाई ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । सडक विभागले चिनियाँ ठेकेदारले हस्तान्तरण नगरीकन केही गर्न नमिल्ने बताएका थिए । अहिले हस्तान्तरण भएको एक वर्षसम्म केही गर्न नमिल्ने भन्दै पन्छिने गरेका छन् ।
बालकुमारी चोकमा बढी दुर्घटना हुने भएकाले सडकको बीचमा दुइटा सेतो धर्सोसहितको ट्राफिक चिह्न राखिएको छ । यो चिह्न नाघेर जानु ट्राफिक नियम उल्लंघनमा ठूलै गल्ती मानिन्छ । तर सवारी चालकले पटक–पटक नियमको वेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
इन्जिनियर भूषण तुलाधारले सरकारले चाहेमा यस्ता कार्यहरू तत्कालै रोक्न सक्ने बताए । चक्रपथ सुधार योजना प्रमुख अमृत रिमालले ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अपांगता भएका व्यक्तिलाई सडक वारपारमा सहज बनाउने विषयमा योजना बनाइरहेको प्रतिक्रिया दिए ।
प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७६ ०९:०९